Ogaden News Agency (ONA) – Hogaaminta HAAU oo Kulan Heer Sare ah Iskugu Yimid Maanta Guulna Kudhamaystay Kulankoodii.
Hogaaminta HAAU oo Kulan Heer Sare ah Iskugu Yimid Maanta Guulna Kudhamaystay Kulankoodii.
Waxaa maanta kulan heer sare ah iskugu yimid iyadoo la,adeegsanayo qalabka isgaadhsiinta casriga ah ( Tell Conferense) Masuuliinta oogu saraysa Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka (HAAU). Shirkan oo socday mudo dhawr saac ah ayaa waxaa kuwada kulmay Gudoonka oogu sareeya ee HAAU, Masuuliinta Waaxaha Hogaanka, Iskuduweyaasha Qaaradaha ee HAAU iyo Madaxa Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya (OYSU).
Kulankan oo kamid ah kulamadii joogtada ahaa ee Madaxda HAAU ay iskugu imaan jireen ayaa lagu falanqeeyay aadna loogu lafo guray qodobo Halganka Ogadenya asaasi u ah kuwaasoo kusaabsan Qorshe Sanadeedka Hogaanka sida waxqabadka iyo horumarinta arimaha halganka guud ahaan. Qodobadan ayaa waxaa kamid ahaa Abaabulka iyo Hirgalinta shirwaynaha Hooyooyinka (Haweenka) Somalida Ogadenya oo laqorshaynayo in laqabto haduu eebuhu yiraahdo bisha December ee dhamaadka sanadkan aan kujirro, shirkan ayaa lagu qaban doonaa caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen, Shirwaynihii sanadlaha ahaa ee Jaaliyaadka Somalida Ogadenya oo lagu qaban doono magaalada London ee wadanka UK bisha Ramadaan ee barakaysan kabacdi haduu Alaha Awooda leh ogolaado. Kulankan ayaa kusoo beegmay xilli ay wadaan Hogaanka oogu sareeya ee JWXO abaabul balaadhan oo kusaabsan balaadhinta iyo hirgalinta hawlaha halganka ee kasocda shanta qaaradood ee aduunka.
Dhanka kale waxaa siqoto dheer leh loogu falanqeeyay aadna looga wada dooday xaalada cusub ee maanta soo foodsaartay Gumaysiga gabalkiisu dhacay ee Wayaanahu hormuudka uyahay ee ka,arimiya Itoobiya. JWXO ayaa hormuud u ah guud ahaan mucaaradka Itoobiya oo idil taasoo kor uqaadaysa magaca iyo maamuuska ay JWXO kudhex leedahay guud ahaan mucaaradka Itoobiya oo idil. Marxaladan cusub ee Wayaanuhu kujiro ayay lagama maarmaan noqotay in Madaxda JWXO ay dardar galin iyo abaabul xoogan oogu jiraan sidii loohanan lahaa xoriyada uu shacbiga Somalida Ogadenya mudada dheer oogu jiray hanashadeeda. Marxaladan oo ubaahan in shacabka Ogadenya uu siwadajir ah iskaga kaashado sidii Wayaanaha looga xorayn lahaa ciida hooyo.
Kulamada noocan oo kale ah eey iskugu yimaadaan madaxda Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka ee HAAU ayaa lafdhabar u ah dardar galinta iyo hirgalinta hawle halgameedka uyaala Hogaanka HAAU kaasoo siwanaagsan ooga socda dhamaan xarumaha ay kahawlgalaan Jaaliyaadka Somalida Ogadenya .